Stephen Hawking nwụrụ - Ngwudata egwu na mgbasa ozi ntanetị maka vidio vidio gị ma ọ bụ ọrụ mgbasa ozi
HomeNdị mmadụStephen Hawking nwụrụ
Stephen Hawking nwụrụ	Hapụ ikwu
Stephen William Hawking (8 January 1942 Oxford - 14 March 2018 Cambridge) bụ a British n'ọnụ physics na otu n'ime ndị kasị ama ndị ọkà mmụta sayensị n'ozuzu ha. Budata so tumadi ndị dị iche iche ubi nke cosmology na kwantum ike ndọda, na na afọ 1979 ka 2009 lukasiánského ẹkenịmde na post of Prọfesọ nke Mathematics na Cambridge University.
A mụrụ 8. January 1942 nọ na mahadum dị na Bekee nke Oxford nye ndị nne na nna Frank na Isobel (Walker) Hawking. O nwere ụmụnne nwanyị abụọ ndị tọrọ, Philip na Mary na nwa nwanne nna Edward. Nna m bụ Frank Hawking bụ onye nchọpụta na-ahụ maka ebe okpomọkụ, na mama m Isobel Hawking na-etinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka ekpe.
Ndị nne na nna kwagara Oxford si London n'oge na-adịghị anya tupu a mụọ ya iji zere ọdachi nke bombu obodo ahụ n'oge Agha Ụwa nke Abụọ. Na 1950, ezinụlọ ahụ kwagharịrị, oge a na St. Albans n'ebe ugwu nke London, ebe Hawking gara otu mahadum obodo.
Mgbe nna ya rịọrọ ya ka ọ na-amụ ọgwụ dị ka onwe ya, ma ọ nwere mmasị na mgbakọ na mwepụ, physics na onwu. Tupu ya agụsị akwụkwọ, ọ rịọrọ ka e nye ya ụlọ akwụkwọ mahadum Oxford, ka e wee nata ya ma nata akwụkwọ ọmụmụ. Ọ gaghị ekwe omume ịmụ akwụkwọ mgbakọ na mwepụ na ụlọ akwụkwọ, ya mere, kama 1958, ọ raara onwe ya nye na nkà mmụta sayensị na ọ bụ otu n'ime ụmụ akwụkwọ kachasị mma.
Ochicho ya bu ichoputa ihe omumu ihe omumu na University of Cambridge. Na 1962, o weghaara ule ahụ nke ọma na site na 1963 ọ mụrụ na Cambridge. 1965 malitere ịrụ ọrụ na Ph.D. ya na Prọfesọ Denise Sciama, onye ọ kwadoro otu afọ ka e mesịrị, e nyekwara ya Ph.D.
Ọ bụ nke mbụ na-eme nchọpụta (Research Ụmụnna) na mgbe e mesịrị na-adịgide adịgide so (Professorial Ụmụnna) University Gonville na Caius College, Cambridge. Mgbe ahapụ Institute of Astronomy, o jere ije na 1973 na Department of Applied Mathematics na usoro iwu Physics, na ebe ọ bụ na 1979 Lukasiánského ẹkenịmde ọnọdụ nke prọfesọ nke mgbakọ na mwepụ na na uche ya na ọ tọrọ ntọala na 1663 so na Varsity nzuko omeiwu Reverend Henry Lucas. Lucasian Prọfesọ na n'oge gara aga na-Isaac Newton.
Ọ bụ ya bụ onye nnata nke ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị enọ na na bụ onye so ọtụtụ nnukwu mụtara ọha mmadụ, gụnyere Royal Society (ebe 1974), ndị Pontifical Academy nke Sciences (ebe 1986) na National Academy nke Sciences USA.
N'agbanyeghị nkwarụ ya ọ ka na-ifịk ke nnyocha sayensị na ikpokọta ndụ ezinụlọ (ya nwere ụmụ atọ na ụmụ ụmụ atọ) na nnyocha na ubi nke usoro iwu physics na-achọ njem omume nke okwu ihu ọha.
2010 kwuru na ọ ga-ekwe omume ịga njem na oge, ma ọ bụ tupu oge eruo, nakwa na ọ ga-ekwe omume na a ga-ebibi ụwa n'oge ahụ.
2014 kwuru na enweghi ike ịhụ oghere ojii.
Ná mmalite nke Oxford, ihe ịrịba ama mbụ nke ọrịa ya, sclerosis n'ụbụrụ amyotrophic, bụ nke na-awakpo usoro ahụ ụjọ na-eme ka ọ bụrụ nke ahụ na-apụta ụfụ nke ahụ, gosipụtara. Ebe ọ bụ na 1968 enwere ike ịkwaga nanị n'oche nkwagharị na ebe ọ bụ na 1985 na-ekwu okwu na ụwa ọzọ na kọmputa pụrụ iche.
N'oge ọ bụ nwata, ọ na-agba ịnyịnya ma na-egwuri egwu na ụmụaka ndị ọzọ. Na Oxford, ọ bụ onye agha nke otu ìgwè na-agba ịnyịnya, bụ nke, dị ka ya onwe ya kwuru, nyeere aka mee ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mahadum ghara ịdị. Mgbaàmà nke ọrịa ahụ pụtara mgbe ọ debara aha na Mahadum Cambridge. Ọ na-adaba na steepụ ma daa, na-egbu isi ya. N'ihi na ọ na-atụ egwu na ọ furu efu ya, Mensa nwalere ule iji chọpụta na ike ya anaghị echegbu onwe ya. A chọpụtara ọrịa ya mgbe ọ bụ 21 maka afọ, n'oge na-adịghị anya tupu agbamakwụkwọ mbụ ya, na dịka ndị dọkịta si kwuo, ọ dịrịghị ndụ karịa afọ abụọ ma ọ bụ atọ.
O ji nwayọọ nwayọọ kwụsị ịchị achị aka ya, ụkwụ ya, na olu ya, emesịa mee ka ahụ ya kpọnwụọ. Na 1985, n'oge nleta na CERN na-eme nnyocha na Geneva, ọ na-arịa ọrịa oyi n'ahụ, nke na-ekwu na ọ bụ ndụ egwu. Ihe si na ya pụta bụ nsogbu na-egbu ume dị ukwuu, nke a na-enwe ike idozi site na tracheotomy, bụ ebe ọ na-enweghị ike ikwu okwu. Kemgbe ahụ, ọ na-eji ụda olu eletrik na-ekwurịta okwu. Ngwaọrụ mbụ ahụ nwere olu America, Hawking ejiriwo ya mee ogologo oge, ọ bụ ezie na ọ dịbeghị anya. Mgbe a jụrụ ya ihe mere o ji bụrụ, ọ sịrị na ọ nụtụbeghị olu ọ na-amasịkwu, nakwa na ọ matala ya. Otú ọ dị, e mesịrị nweta 2004 na NeoSpeech na-eji usoro VoiceText ugbu a.
N'agbanyeghị nkwarụ ya kwuru na ya dị ka "kechioma" ọ bụghị naanị n'ihi na nke onye na-adịghị na-enwe ọganihu nke ọrịa nye ya oge ime nchoputa di mkpa, ma na-enwe, ya onwe ya kwuru, "a nnọọ maa mma ezinụlọ." Mgbe nwunye ya mbụ Jane jụrụ ihe mere o kpebiri ịlụ a mmadụ nke atọ afọ nke ndụ, ọ zaghachiri, sị: "Ọ bụ a oge nke egwu nuclear mbibi, ya mere, na atụmanya nke a obere ndụ, anyị niile nwere."
Ọ na-arụ ọrụ na iwu ndị bụ isi maka ọrụ nke eluigwe na ala. Na Roger Penros, o gosipụtara na echiche Einstein n'ozuzu ya na-ekwu na oge na ohere nwere mmalite nke nnukwu ụlọ na njedebe n'ọgba ojii. Ihe ndị a na-egosi na ọ dị mkpa iji dozie nkwupụta zuru ezu na nkwupụta quantum, nchọpụta sayensi ọzọ dị ịrịba ama nke ọkara mbụ nke 20. narị afọ. Otu n'ime ihe ndị na - esi na nnyocha ndị a pụta bụ nchọpụta ya na oghere ojii agaghị abụ nwa ma kwesiri ikwe ka redio ma mesịa jiri nwayọọ nwayọọ belata ma mesịa laa n'iyi kpamkpam. Onye ọzọ bụ na e chere na eluigwe na ala enweghị oke ma ọ bụ ókè na oge ọ bụla. Nke a ga - apụta na iwu nke sayensị kpebisiri ike na usoro eluigwe na ụwa malitere.
← Ịgha ụda egwu & chizenzi Jizera
Amamịghe echiche →